Anteriormente - Spanisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: anteriormente (Spanisch - Burmesisch)
el lugar del altar que había hecho allí anteriormente. Y Abram invocó allí el nombre de Jehovah
ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်ခဲ့ဘူးသော အရပ်သို့ ရောက်ပြန်လျှင်၊ ထိုအရပ်တွင် ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ကို ပဌနာပြု၏။
Anteriormenteasu arresto, algunos vecinos del lugar bloquearon una de las autopistas más importantes de la capital .
ယခင်လက ဘာဝယ်(လ်)ပါရှိ စိတ်မနှံ့သူတစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူတစ်ဦးက မီးရှို့ခဲ့သည်၊
ငါတို့သည် ကျမ်းစာ၌ပါသောသည်းခံခြင်း၊ သက်သာခြင်း အကြောင်းများကိုအမှီပြု၍ မြော်လင့်ရ သော အခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ၊ ကျမ်းစာ၌ အထက်ကရေးထားသမျှသည် ငါတို့ကို ဆုံးမဩဝါဒပေး၍ ရေးထား သတည်း။
En el tercer año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido anteriormente
Richard Fuller es presidente de Pure Earth (anteriormente Blacksmith Institute) y miembro fundador de la Global Alliance for Health and Pollution.
ရစ်ချတ် ဖူလာ (Richard Fuller) သည် သန့်စင်သော ကမ္ဘာမြေကြီး Pure Earth (ယခင် Blacksmith Institute)၏ ဥက္ကဌဖြစ်ပြီး Global Alliance for Health and Pollution ကို စတင်တည်ထောင်သူ အဖွဲ့ဝင်တဦးလည်း ဖြစ်သည်။
Y los hebreos que anteriormente habían estado con los filisteos, y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, también ellos se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán
အထက်ကာလ၌ ဖိလိတ္တိလူတို့ဘက်မှာနေ၍ အရပ်ရပ်တို့က တပ်သို့ လိုက်လာသော ဟေဗြဲလူတို့ သည်လည်း ရှောလုနှင့် ယောနသန်၌ ပါသောဣသရေလလူတို့ဘက်သို့ ဝင်ကြ၏။
Dentro de tres días el faraón te hará levantar cabeza y te restituiráatu puesto. Volverásaponer la copa en la mano del faraón, como solías hacerlo anteriormente, cuando eras su copero
သုံးရက်လွန်မှဖါရောမင်းသည် သင်၏ဦးခေါင်း ကို ချီးမြှောက်၍ သင်၏အရာကိုပြန်ပေးတော်မူသဖြင့်၊ သင်သည်အထက်က ဖလားတော်ဝန်ဖြစ်၍ ပြုဘူးသည် နည်းတူ၊ တဖန်ဖလားတော်ကို ဖါရောမင်း၏လက်တွင် ဆက်မြဲ ဆက်ရလိမ့်မည်။
andernfalls (Deutsch>Burmesisch)mechanického (Slowakisch>Deutsch)ukoll (Maltesisch>Polnisch)coulomb energy (Englisch>Deutsch)prix fi (Französisch>Englisch)danas (Serbisch>Russisch)iliyoambatana (Swahili>Spanisch)cúmulus (Spanisch>Holländisch)exercice social (Holländisch>Englisch)ongeopend (Holländisch>Englisch)yekem (Kurdisch>Englisch)ano ang degree ng hawaii (Englisch>Tagalog)geuzennaam (Holländisch>Englisch)andare in campeggio (Italienisch>Deutsch)civitatis (Latein>Indonesisch)suthanthira thinam speech for kids (Englisch>Tamilisch)joriye thaka (Bengali>Englisch)kkummerċjalizzata (Italienisch>Spanisch)silver price charts (Englisch>Französisch)mai tumse nhi milna chahta hu (Hindi>Englisch)definerad (Schwedisch>Französisch)dravle (Norwegisch>Englisch)t?ang (Englisch>Türkisch)skull (Englisch>Lettisch)instasolv (Ungarisch>Englisch)